दाङमा शीर्ष नेताले कसले कहाँबाट... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
दाङमा शीर्ष नेताले कसले कहाँबाट मतदान गरे?
नारायण खड्का दाङ, मंसिर २१
दीपक गिरीले बैबाङबाट मतदान गरे
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं निर्वाचन क्षेत्र नं. ३का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार दीपक गिरीले बैबाङबाट मतदान गरेका छन्।
दंगीशरण गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित रात्री निमावी बैबाङ मतदान केन्द्रबाट पूर्व सिँचाईमन्त्री समेत रहेका गिरीले मतदान गरेका हुन्। उनले उक्त मतदान केन्द्रमा पहिलो मतदान गरेका हुन्। मतदानपछि सम्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै निर्वाचन उत्सवमय बनाउन सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। निर्वाचनपछि देशले निकास पाउने उनको धारणा थियो ।
डिल्लीबहादुर चौधरीले मावि सेन्टरबाट मतदान गरे
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मावि तुलसीपुर सेन्टरवाट मतदान गरेका छन्।
निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (१)का प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार समेत रहेका श्रम राज्य मन्त्री चौधरी साढे सात बजेतिर मावि सेन्टरको (ख) मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ स्थित उक्त मतदान केन्द्रमा राज्य मन्त्री चौधरी बिहान साढे ७ बजेतिर मतदानका लागि पुगेर सर्वसाधारण मतदाताहरु सँगै लाइनमा बसेका थिए। तर, पछि निर्वाचन अधिकृत भुपबहादुर केसीले उनलाई मतदानका लागि सर्वसाधारणको लाइनबाट अगाडि आउन आग्रह गरेका थिए।
उनले मतदान सक्दा झन्डै ७ : ४५ भइसकेको थियो । मतदान पछि सम्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै राज्य मन्त्री चौधरीले आजको दिन ऐतिहासिक दिन भएको भन्दै एकदिन सबैले राष्ट्रका लागि योगदान गर्न आग्रह गरेका थिए।
उत्साहका साथ मतदान हुने विश्वास व्यक्त गरेका उनले यो निर्वाचन पछि संविधान र संघीयताको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन सुरु हुने तथा देश सम्वृद्धिको मार्गमा अगाडि लम्किने बताए । उनले विचलित नभएर ढुक्कका साथ मतदान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
शंकर पोखरेलले जनता विद्यापिठमा गरे मतदान
नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (१)का प्रदेशसभा सदस्य पदका उम्मेदवार शंकर पोख्रेलले पनि तुलसीपुर उपमाहानगरपालिकाको वडा नं. १९ बाट मतदान गरेका छन्।
उनले जनता विद्यापिठमा गएर मतदान गरेका हुन्। पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका पोख्रेललाई वाम गठवन्धनले ५ नं. प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको रुपमा प्रचारप्रसार गर्दै आएको छ।
पोख्रेल पनि उक्त मतदान केन्द्रमा झन्डै साढे सात बजे नै मतदानका लागि पुगेका थिए। मतदान पछि संक्षिप्त प्रतिकृया दिँदै पोखरेलले संविधान कार्यान्वयनको खुट्किलोमा रहेको भन्दै यो निर्वाचनले शान्ति र स्थिरता दिने बताए।
उनले बाम गठवन्धनले स्थायी सरकार दिने दाबी पनि गरेका थिए । नेता पोख्रेलले दाङ राजधानीका लागि सबै दृष्टिकोणले उचित रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
तुलसीपुरबाट अपारको मतदान
बाम ठबन्धनकाको तर्फवाट निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (१)मा प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य जगप्रसाद शर्मा‘अपार’ले मतदान गरेका छन्।
उनले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १२ हरिपौरीमा रहेको पशुपति माबिबाट मतदान गरेका हुन् । अपारले बिहान ७ बजे लगतै मतदान गरेका थिए ।
९२ वर्षीयले गरे मतदान
दाङमा एक जना ९२ वर्षीय जेष्ठ नागरिकले मतदान गरेका छन्। बबई गाउँपालिका वडा नं. ५ हापुरे मतदान केन्द्रवाट बिहान सवा सात बजे ९२ वर्षीय फुर्सुराम आइतवारे पाण्डेले मतदान गरेका हुन्।
पाण्डेले जनकल्यान मावि पदमपुरवाट मतदान गरेको सहायक निर्वाचन अधिकृत तुलसीराम वलीले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर २१, २०७४, ०९:१६:५८